Ampidino Browsers Rindrambaiko ho an'ny Windows
Ampidino Browsers Rindrambaiko
SlimBrowser dia manana rafitra tena tsotra raha oharina aminireo mpizaha Internet hafa. Toy izany koa, SlimBrowser, izay manana habe kely kokoa noho ireo mpitety Internet hafa, dia mamela anao hijery Internet aminny fomba haingana sy azo antoka. Misokatra haingana i SlimBrowser, miaraka aminny tombotsoany aminny maha-programa izay miasa...
CCleaner Browser dia mpizaha tranonkala izay misy fiarovana sy tsiambaratelo hitazona anao hilamina aminny Internet. Izy io dia miaraka aminny fitaovana rehetra ilainao hitantanana ny fiainanao manokana momba ny fiainana manokana, ny momba anao ary ny angon-drakitrao manokana. Azonao atao ny misintona sy manandrana CCleaner Browser,...
Chromodo dia mpizaha Internet izay navoakanny orinasa Comodo, izay fantatsika tsara aminny rindrambaiko antivirus, ary manintona ny saina aminny maha-zava-dehibe azy io aminny filaminana. Chromodo, mpitety izay azonao sintonina sy ampiasainao maimaimpoana aminny solo-sainanao, dia aminny ankapobeny dia tranokala natsangana ao...
HTTPS Na aiza na aiza dia azo faritana ho add-on browser izay azonao ampiasaina raha mikarakara ny filaminanao aminny Internet ianao. HTTPS Na aiza na aiza dia azo heverina ho toy ny rafitra iray izay mitandrina ho azy aminny alàlanny fanamarinana raha azo antoka na tsia ireo tranonkala fitsidihanao aminny Internet. Azonao atao ny...
Brave Browser dia misongadina miaraka aminny rafitra fanakanana doka anatiny, ny fanohanana https aminny tranokala rehetra, ary ny fanokafana haingana ireo pejin-tranonkala, natao ho anireo mpampiasa mitady ny hafainganam-pandeha sy ny filaminana ao anaty tranokala. Tsindrio ny bokotra Download Brave etsy ambony raha hanandrana ny Brave,...
Facebook AdBlock dia extension adblock izay manakana ny doka aminny sehatra Facebook izay ampifandraisinao avy aminny browser. Aminity fanitarana ity dia azonao atao ny mihazakazaka aminny tranokala Google Chrome ampiasainao aminny solosainao, azonao atao ny manala ireo doka efa reraky ny mahita mandrakizay. Raha tsy te-hahita doka...
TunnelBear dia programa mahomby izay azonao ampiasaina hitantanana ny fifamoivoizanao aminny Internet ary hahatonga azy io ho toa miditra aminny Internet aminny firenena hafa eto aminizao tontolo izao. Aminizany fomba izany dia azonao atao ny manafina ny mombamomba anao aminny fivezivezena malalaka aminny Internet tsy mitonona anarana. ...
Miaraka aminny fanitarana Touch VPN novolavolaina ho anny mpizaha Google Chrome, azonao atao ny mizaha Internet sy milamina ary haingana nefa tsy voasakana. Ny rindranasa VPN no voalohany tonga ao an-tsainao rehefa tsy azo idirana ny tranonkala na miadana tsy ara-dalàna ny Internet. Azo atao ny mampiasa ny fanitarana Touch VPN, izay...
Opera Neon dia mpizaha Internet izay novolavolainny ekipa namorona ny Internet browser Opera nahomby. Opera Neon, izay mpitety tranonkala maimaimpoana namboarina teo aminny fotodrafitrasa Chromium toa ny Google Chrome sy Opera, dia manome antsika traikefa fampiasana azo ampiharina kokoa aminny alàlanny fanolorana aminay ireo fiasa efa...
Chromium dia tetikasa fizahana loharano misokatra izay manangana ny fotodrafitrasa ao aminny Google Chrome. Ny tetikasa fanamoriana Chromium dia mikendry ny hanome ny mpampiasa traikefa aminny Internet tsara indrindra miaraka aminny kinova azo antoka, haingana kokoa ary azo antoka kokoa. Ny Chromium dia mivoatra hatrany aminny resaka...
Ghost Browser dia mpizaha Internet mahery sy miasa azonao ampiasaina aminny solosainao birao. Azonao atao ny mifehy ny kaontinao rehetra aminny varavarankely tokana miaraka aminny navigateur, izay manana endrika mahery vaika kokoa noho ny iray hafa. Raha mampiasa Internet isan-karazany ianao aminny fizahana ireo kaontinao samihafa dia...
Avant Browser dia mpizaha Internet izay manakana ny pop-up sy plugins flash tsy ilaina rehetra raha mamela ny mpampiasa hijery tranonkala marobe aminny fotoana iray. Ity programa ity, izay manampy ny mpampiasa hanadio ny mombamomba azy manokana sy ny sisa tavela miaraka aminilay mpanadio tafiditra ao aminy, dia misongadina ho safidy...
Vivaldi dia mpikirakira Internet tena ilaina, azo atokisana, vaovao ary haingana izay manana hery hanakorontanana ny fifandanjana eo amini Google Chrome, Mozilla Firefox ary Internet Explorer, izay nanjakazaka taminny indostrianny mpizaha Internet nandritra ny fotoana lava be. Ilay mpizaha Internet vaovao, novolavolaini Jon Von...
Yandex Browser dia mpikirakira Internet tsotra, haingana ary ilaina novokarinny motera fikarohana malaza indrindra any Rosia, Yandex. Toy ny ao aminny Google Chrome, Yandex Browser, natsangana teo aminny fotodrafitrasa Chromium, dia manintona ny sainny mpampiasa interface tsara. Ampidino ny Browser Yandex Misaotra ani Yandex Browser,...
Aminny alàlanny extension extension CatBlock dia azonao atao ny mampiseho sary saka ao aminny Google Chrome browser fa tsy manakana ny doka. Ny loharanom-bola manan-danja indrindra aminny tranokala dia azo avy aminny dokam-barotra tohananny. Ny famoahana doka ho setrinny serivisy atolotra aminny tranokala dia tena ara-dalàna ary ilaina....
Miaraka aminny endriny tsotra sy tsara tarehy, ny Safari dia manintona anao hiala aminny lalanao mandritra ny fitetezana Internet ary mamela anao hanana traikefa aminny Internet mampiala voly indrindra nefa mahatsiaro ho voaro. Ity programa ity, izay be fatra-paniry laza ny Apple momba ny hafainganam-pandeha sy ny fiarovana, dia mitohy...
Opera dia mpizaha tranonkala iray hafa izay mikendry ny hanome ny mpampiasa traikefa aminny Internet haingana sy mandroso indrindra aminny motera nohavaozina, ny interface interface ary ny endriny. Misintoma Opera Ny fanamafisana ny fotodrafitrasa miaraka amini Chromium sy Blink hitazomana ny toerany eo aminireo mpitety tranonkala...
Firefox dia mpizaha Internet open source novolavolaini Mozilla hahafahanny mpampiasa internet mivezivezy aminny Internet malalaka sy haingana. Mozilla Firefox, izay atolotra ho anireo mpampiasa maimaimpoana, miaraka aminireo fanavaozana farany; Nanjary hentitra be taminny mpifaninana aminy toa ny Google Chrome, Opera ary Microsoft Edge...
Maxthon Cloud Browser dia mpizaha tranonkala maimaim-poana izay nahavita nampitombo ny fototry ny mpankafy azy tao anatinny fotoana fohy noho ny interface-friendly-friendly anny mpampiasa azy. Ho fanampinizay, manome ny traikefa haingam-pandeha haingam-pandeha sy fahombiazana tsara ho anny mpampiasa ny mpizaha. Ho fanampinizay, misy...
Google Chrome Canary no anarana nomeni Google ho anny kinova mpamorona anny Chrome. Taorianny niovanny rafi-pandidiana Android taminny famolavolana materialy dia nanomboka nanavao ireo rindranasa novolavolainy i Google, voalohany ny YouTube, ary nanomboka nanova ny volavolanny rindranasa toa ny Gmail. Ny orinasa, izay nanavao...
Opera GX no mpizaha Internet voalohany natokana ho anny mpilalao. Ny fanontana manokana anny tranokala Opera, Opera GX, dia misy endri-javatra tsy manam-paharoa hanampiana anao hahazo tsara indrindra aminny lalao sy ny fitetezana. Sintomy ny Opera GX Tsy vitanny hoe manara-maso ny fampiasana RAM sy CPU aminny alàlanny browser fotsiny...
Basilisk dia rindran-tranonkala fikarohana loharano misokatra noforoninny mpamorona ny navigateur Pale Moon. Ankoatry ny maha-tranokala maoderina sy feno fisehoan-javatra azy dia mikendry ny hiaro ireo haitao ilaina aminny Firefox. Ho anny add-ons, Basilisk dia manana fanohanana mitovy aminny extension XUL / XPCOM sy add-on NPAPI, izay...
AVG Secure Browser dia miavaka aminny maha-mpitety Internet azy haingana, azo antoka ary tsy miankina. AVG Browser, izay misy fiasa tsy hita aminny tranokala tsotra toy ny mode incognito, manakana ny doka, mamela ny fampiasana ny encrypt HTTPS, ny fiarovana aminny script, ny fanafenana ny dian-tànana, dia azo alaina aminny fitaovana...
Google Chrome dia mpizaha Internet tsotra sy tsotra ary malaza. Ampidiro ny tranokala Google Chrome, mivezivezy haingana sy milamina aminny Internet. Google Chrome dia mpizaha Internet maimaimpoana sy malaza miaraka aminny haitao marani-tsaina ani Google. Ny safidy voalohany ampiasainny mpampiasa maro izay te-hijery Internet haingana sy...
Firefox Quantum dia mpizaha tranonkala maoderina izay natao ho anireo mpampiasa solosaina manana rafitra fikirakirana Windows, mandany fahatsiarovana kely kokoa, miasa haingana. Manana mpizaha tranonkala iray izay miasa haingana be kokoa noho ny kinova mahazatra Mozilla Firefox izahay, tsy mandany loharano firy ary manolotra sehatrasa...